Ihe ngosi 5 I na-aputa ebe nchekwa data MySQL gi Martech Zone
Usoro njikwa data dị mgbagwoju anya na-agbanwe ngwa ngwa. Onweghi ihe na - emesi evolushọn a ike karịa mmalite nke 'super apps' - ma ọ bụ ngwa na-ahazi nde mmekọrịta onye ọrụ kwa nkeji Ihe kpatara na nnukwu data na igwe ojii, ọ bịara doo anya na ndị ahịa e-commerce chọrọ ọgbọ ọhụrụ nke ọdụ data nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ogo ngwa ngwa.
Azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị na-enweghị nchekwa data emelitere nwere ike na-aga MySQL, nchekwa data amachaghị emelitere kemgbe ọ malitere na 1995. E kwuwerị, okwu ahụ bụ "NewSQL" abughi akụkụ nke akwụkwọ ọkọlọtọ dijitalụ ruo mgbe Matt Aslett, onye nyocha maka 451 Group , chepụtara ya na 2011.
Ọ bụ ezie na MySQL nwere ike ijikwa ọtụtụ azụmahịa, ebe azụmahịa na-aga n'ihu na-eto eto, nchekwa data ya nwere ike iru oke ike yana weebụsaịtị ya ga-akwụsị ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ n’inweghi obi ike na nzukọ gị dị njikere maka nchekwa data NewSQL, ọ bụ akara ise ị nwere ike ịbawanye MySQL:
Ihe isi ike na-agụ, ede na mmelite - MySQL nwere ikike adịghị ike. Dika otutu ahia na emezue azụmahịa na webusaiti gi, obu ihe diri tupu mgbe nchekwa data gi gha. Ọzọkwa, ka ibu gị na-abawanye, ọ na-esiri gị ike ijikwa ịgụ na ide ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịchọ nchekwa data dị iche. MySQL nwere ike na-agụ agụ site “agụ-ohu”, ma ngwa nwere na-maara na-agụ abụghị asynchronous na ide-ukwu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ahịa na-emelite ngwaahịa na ụgbọ ala e-commerce ya, a ga-agụ ya site na onye edemede. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịnweta ọnụọgụ dị na nkwa na-ezighi ezi. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, ị ga-enwe nsogbu na ebe kachasị njọ: usoro ndenye ọpụpụ e-commerce gị. Mkpọchi na ndenye ọpụpụ nwere ike ibute ụgbọ ala gbahapụrụ agbahapụ, ma ọ bụ nke ka njọ, ị ga-ere ngwaahịa ị na-enweghị, na ị ga-emeso ndị ahịa iwe, yana ikekwe mgbasa ozi mgbasa ozi na-adịghị mma.
onye na-adịghị nchịkọta na akuko - MySQL ọdụ data adịghị enye ezigbo oge nchịkọta ike, ma ọ bụ na ha adịghị enye nkwado maka ndị ọzọ SQL rụrụ. Iji dozie nsogbu a, a chọrọ Multi-Version Concurrency Control (MVCC) na Massively Parallel Processing (MPP) maka ịhazi oke ọrụ n'ihi na ha na-ekwe ka ederede na nchịkọta ime n'enweghi nnyonye anya, ma jiri otutu ọnụ na otutu isi na otu iji mee ka nyocha nyocha na-aga ngwa ngwa.
Oge ezumike - A na - eji otu isi nke ọdịda rụọ MySQL ọdụ data, nke pụtara na ọ bụrụ na akụrụngwa ọ bụla - dịka draịva, motherboard, ma ọ bụ ebe nchekwa - ada ada, nchekwa data niile ga-ada. Dịka nsonaazụ, ị nwere ike ịnwe oge ụra oge niile, nke nwere ike ime ka ị ghara ịnweta ego. Nwere ike iji sharding na ndị ohu, mana ndị a na-emebi emebi na enweghị ike ijikwa ọtụtụ okporo ụzọ. Ihe nchekwa data na-eme ọtụtụ data gị, na-enye nnabata mmejọ ma na-echekwa arụmọrụ n'agbanyeghị na / ma ọ bụ ọdịda disk.
High Mmepụta akwụ ụgwọ - Ndị mmepe na - arụ ọrụ na ọdụ data MySQL ga - etinye nnukwu akụkụ nke oge ha na - edozi nsogbu mmiri ma ọ bụ na - ekwu maka ọdịda nchekwa data. Ndị mmepe na-arụ ọrụ na nchekwa data nwere nnukwu onwe ha kama ịrụ ọrụ na mmepe atụmatụ na ịnweta ngwaahịa ahụ ngwa ngwa. N'ihi ya, oge ịre ahịa na-ebelata na ụlọ ọrụ e-commerce nwere ike ị nweta ngwa ngwa ngwa ngwa.
Maxed si sava - Servers maxing na RAM maka ogologo oge, ma ọ bụ ugboro ugboro na ụbọchị, bụ isi ihe na-egosi na MySQL enweghị ike ijide na azụmaahịa. Hardwaregbakwunye ngwaike bụ ngwa ngwangwa, mana ọ dịkwa oke ọnụ ma ọ bụghị azịza ogologo oge. Ọ bụrụ na otu dị iche iche ejiri ụzọ esi apụta, enwere ike ịmegharị data n'ofe ọnụ, yana ka azụmahịa na-abawanye na nha na ego, a na-ebufe ibu ọrụ na ọnụ ndị ọzọ n'ime nchekwa data.
O doro anya, MySQL nwere njedebe ya, nke ahụ nyere oge na uto okporo ụzọ, nchekwa data MySQL ọ bụla ga-enweta arụmọrụ na nsogbu adịghị mma. Na maka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, ihe ojoo ndi ahu gha emegharia n'ime uzo ndi enwetara.
A sị ka e kwuwe, o kwesịghị iju anyị anya na nkà na ụzụ nke e wuru iri afọ abụọ gara aga na-agbasi mbọ ike ịnọgide na ụwa dijitalụ a na-agba ọsọ ugbu a. Chee echiche banyere ya: kedu ka ndị mmemme na 1995 ga-esi hụ etu thentanetị ga-esi dị ike?
Tags: ustyọkọarụmọrụ dataọdịnihu nchekwa dataMySQLMySQL ijeMySQL njikọMyysql na-agụMySQL akukommelite mysqlMySQL na-ede
Mike bụ onye isi na onye isi ọrụ nke Clustrix. Mike nwere ihe karịrị afọ 25 nke ire ahịa na ahụmịhe onye isi ọrụ na ngwa nyocha nyocha, njikwa grid, akụrụngwa nchekwa, nchekwa na ụlọ ahịa.